Jo Nesbø kunye nogqirha wakhe Proctor. Uninzi lokuzonwabisa lwabantwana kunye nabantu abadala. | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Ababhali, Iincwadi, Iincwadi zoLutsha
Iincwadi zabantwana zikaJo Nesbø. IiAdventures zikaGqirha Proctor.
Isipho esigqibeleleyo zeMagi ze bantwana unobundlobongela, uqikelelo kunye nezopolitiko azichanekanga 9 kunye neminyaka eli-12. Kuba Jo Nesbø, inkosi yaseNorse yohlobo, babhalele. Kwaye wenza njalo ngomthamo ofanayo wokuhlekisa, ukoyikisa kunye nokunxibelelana njengakwincwadi yakhe yabantu abadala. Elula ukufunda, ezele kukucinga, uthando, uloyiko kunye nokuzonwabisa, wakhe Ingcebiso yam ethobekileyo Esi sipho sokufunda esahlukileyo kwaye silungele abantwana ukusukela kwiminyaka eli-9 ukuya kweli-99 ubudala
Lo nyaka uphawula isikhumbuzo se-10 sokupapashwa kwesihloko sokuqala sechungechunge Proctor kagqirha. Kodwa Sele be-5, zamva nje kwaye okomzuzwana zikhutshwe kuphela eNorway. Nanku umpapashi woncwadi lwabantwana Igalari lowo wazipapashayo ngeSpanish. Bayayigcina Imincili kodwa imizekeliso emikhulu zoqobo ezivela kuhlelo lwaseNorway. Bafumanise. Baza kukumangaza.
UJo Nesbø wabhala ezi ncwadana xa ngolunye usuku intombi yakhe selma wamcela ukuba ambalisele ibali Apho kwakukho utitshala ophambeneyo, umntwana omncinci kakhulu (ngelo xesha uSelma, eneminyaka esixhenxe ubudala, wayesoyika abantwana), intombazana elungileyo kwaye ekhutheleyo kunye nedayinaso. Into yedayinaso yayikuphela kwento eshiyekileyo ngaphandle.
Yiyo loo nto Proctor kagqirha Yiyo Umsunguli wewacky kananjalo kakhulu okhaliphileyo y ukubonisa uthando. Lise, Uguquko lukaSelma Nesbø, yintombazana leyo uyathobela kwaye ukhuthele. Unommelwane Iplagi, mntwana encinci, ebomvu ebomvu, ekhohlisayo, ixoki kakhulu kodwa iyonwabisa kakhulu, mhlawumbi ophambili oyinyani kuwo onke amabali. A Umngxunya omncinci weharry, nayo efanayo ukungachaneki kwezopolitiko, ukukwazi ukungena engxakini y izigqibo ezingalunganga ejongene nobunzima.
De Proctor kaGqirha kunye ne-tirapedo powders.
Aba bathathu baya kuba nezahlulo ezahlukileyo neziphambeneyo njengokuyilwa komgubo ovelisa ii-farts ezinkulu, baya kuhamba ixesha bebulela ibhafu yomlingo, baya kukuphepha ukutshatyalaliswa kwehlabathi kwaye baya kusombulula ukuphanga okungaqhelekanga. Ngaphandle kokuziphatha okanye iinjongo zokwenza izinto kuyabonakala, ukuba unokulixabisa ixabiso kwi ubuhlobo, i uthando ngakumbi ukuthandana nokuzincama, i ukugxeka kwezentlalo nezopolitiko okanye amandla okucinga. Olona hlobo lungenamiqathango lombhali luya kufumana ukunqwala kwimisebenzi yakhe yabantu abadala kwaye ngokuqinisekileyo baya kuyazi ithoni yakhe.
1 Uthotho lweDkt Proctor
1.1 Proctor kaGqirha kunye ne-tirapedo powders
1.2 Proctor kagqirha kunye nebhafu yexesha
1.3 Proctor kagqirha kunye nokuphela kwehlabathi. Okanye hayi.
1.4 Proctor kagqirha kunye nokuphanga okukhulu
2 Kutheni uzifunda kwaye uzinike
Uthotho lweDkt Proctor
Proctor kaGqirha kunye ne-tirapedo powders
Bayasazisa kubalinganiswa, Iintsapho zabo, apho bahlala khona, isikolo sabo nabahlobo babo. Sidibana noWacky uGqirha Proctor, othanda ugcino olude kunye nokuyila zonke iintlobo zezinto. UTapon, inkwenkwana encinci enenwele ezibomvu, oye wafudukela nosapho lwakhe eCalle de los Canñones, apho ahlala khona uLise. Kwaye yintoni abaceba ukujongana nayo bobathathu amawele amabi kwisikolo sikaLise noTapon. Ukongeza, kukho ukhululekile inyoka eyomeleleyo ngemijelo yokuhambisa amanzi amdaka yesixeko saseOslo, ebaluleke kakhulu ekupheleni kwebali.
Into ephawuleka kukuba i kungenelela umbalisi ngezihlandlo eziliqela ukulungisa into ngqo kubafundi. Izimvo zakhe ezihlekisayo zisenza nangoku kumnandi ngakumbi ukufunda.
Esi sihloko sokuqala ilungiselelwe ifilimu e 2014.
Proctor kagqirha kunye nebhafu yexesha
Ngaba yincwadi banzi ngakumbi. Ukongeza kwinkcitho yokucinga, sithatha uhambo ukubuyela ngexesha elifanelekileyo isifundo sembali kwindalo iphela. Ngeli xesha uGqirha Proctor uchacha uthando lobudala lobutsha oluye lwanyamalala kwaye uLise noTapon baya kukunceda uyifumane. Kodwa ukufumana isithandwa esilahlekileyo kuya kufuneka bahambe ngexesha besebenzisa ibhafu yomlingo. Bazakuvela kukhenketho lwaseFrance, baya kudibana nomfazi onesono kunye nomlenze wesikhonkwane kunye ne-skateboard, nayo Napoleon, i UJoan waseArc, imfazwe, ukufa kwaye ngaphezu kwawo onke amandla othando.
Proctor kagqirha kunye nokuphela kwehlabathi. Okanye hayi.
Mhlawumbi yeyona icace gca ukugxeka kabukhali ubuzwilakhe, ukubadibanisa nokungazi kwenkcubeko. Ukhuphiswano lwekwayara kumabonwakude luthatha ilizwe liphela kwaye abantu baqala ukwenza iimpazamo zopelo. Umlawuli wekwayala ugxotha uKumkani waseNorway kwaye azibhengeze njengoMongameli. UDkt Proctor, uLise noTapón kuya kufuneka baphande ukuba kutheni yonke le nto isenzeka.
Proctor kagqirha kunye nokuphanga okukhulu
I-adventure mnyama yabo bonke. Amasela anobungozi ayebela ibha yegolide kuphela kwibhanki yaseNorway. Ukumkani uyalela ngoko nangoko ukuba uphandwe lo mbandela. Ukungenelela ngempumelelo ukusindisa ihlabathi, uya kubiza uDkt Proctor, uLise kunye nePlagi. Ke, emva kokufumanisa ukuba abaphangi baseNgilani, bazohamba baya eLondon. Apho baya kuba nenxaxheba kuzo zonke iintlobo zokuzonwabisa eziya kuthi zikhokelele ekujonganeni nazo Indoda esisityebi emhlabeni, i umdlali webhola eyona ibiza kakhulu emhlabeni kwaye ibhola ekhatywayo indebe yokugqibela.
Proctor kagqirha kunye nokuphanga okukhulu.
Kutheni uzifunda kwaye uzinike
Ngenxa yokuba zifundwa ngokuncwina, bahlala iiyure ezimbalwa kum. Zizonke uphambene kunye nokuchukumisa kwendlu uNesbø ngobaxo we a ulwimi yabantwana intsha njengokuba inamandla. Ayenzi minyinyiva okanye ithambe ingqiqo okanye iimeko. Kodwa ngaphezulu kwayo yonke loo nto bahlekisa kakhulu. Nangona kunjalo, ukuba usenamathandabuzo ngokubanika abantwana, yenza eso sipho ngokwakho. Ngokwenene, ungabaphosi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Iincwadi zoLutsha » Jo Nesbø kunye nogqirha wakhe Proctor. Uninzi lokuzonwabisa lwabantwana kunye nabantu abadala.